uPVC Well Casing Pipe & Screen Pipes Vagadziri uye vanotengesa
Makesi Mapepa Wona Range Dhawunirodha Catalog
Nei VINYL uPVC Zvikwepa
Unplasticized Polyvinyl chloride (uPVC), inonyanya kukodzera kuvaka tsime remvura.
Kuwanda kwepamusoro kwePVC kunoisa uPVC pane mukana wekushandisa mumatsime emvura.
UPVC mapaipi ane yakanyanya kukwirira goho kushushikana kwe55N / mm. Kukwirira kwavo kwakanyanya, kunovabvumira kuwana kuomarara kunodikanwa, izvi zvinodzivirira kushanduka kusingadiwe mumapombi.
PVC mapaipi anoshingirira kuzvinhu zvese zvakanyungudutswa mumvura yepanyama yepasi, kusanganisira acids uye munyu. Kuva inoshingirira nemvura yepH renji pakati pe2-12, makemikari anoshandiswa pakuchenesa, kusimudzira, uye kumutsiridza matsime (ese ari maviri uye asina kujairika) haakanganise aya mapaipi.
Kuve Pombi yePurasitiki yekumisikidza iyo Vinyl uPVC Casing PIpes inopa zvisingaenzanisike kuramba kumakemikari abrasion, uye ngura, inowedzerwa nekuve eco-hushamwari ndicho chikonzero chiri kumashure kweVinyl Tubes Pvt. Ltd. Kusarudza kuzvigadzira.
Iko kutsetseka kwakanyanya kushivirira uye kureruka kwepombi dzePVC dzinopa kune avo vashoma vashandi uye kutumira kuchaja uye kuita kuti uPVC pombi ive sarudzo yekuremerwa mashandiro
Kukakavara kushoma pamusoro
Tungamira Mahara uye Heavy Metal Mahara
Yakakwira Izod Impact Simba
Vinyl Tubes kambani inogadzira uPVC inogadzira mapaipi ePVC kuti akwane zvese zvinodiwa pombi mune yekuvaka zvivakwa kungave kuri mumunda wegesi, oiri, kudiridza kana kuburitsa mvura.
Vinyl uPVC mapaipi ekumanikidza uye fittings zvakazvisimbisa kuti zvivimbike, zvine mbiri yakaoneswa muchikamu chekudzosera mvura. Izvo zvakagadzirirwa zvese zviri zviviri kupompa uye giravhiti dhizaini.
HDPE / MDPE Zvikwepa:
Kuita kwakanaka, hupenyu hwakareba & zero kudonha ndizvo zvinozivikanwa Vinyl HDPE / MDPE PIpes. Yakagadzirirwa: Geothermal mafomu, Maseru uye maindasitiri anotapudza mvura masystem, Natural gasi kugovera, Kudiridza, kugadzirisa nzvimbo, Sewer pombi masystem, Pipeline kugadzirisa.
Yakadzika Zvakanaka WellVC casing system
Vinyl Tubes inogadzira uPVC zvakanaka casing masisitimu ayo anogona kudzikiswa kusvika pakadzika kusvika ku600m. Hupenyu hwemakore makumi mashanu+ hunopa vatengi mhinduro yekureba.
Vinyl Piezometric mapaipi akagadzirirwa kuzadzikisa zvido zvekuongororwa kwenzvimbo uye kuongorora. Iwo akanakisa ekuongorora Saiti, Sampling yeMvura yepasi pevhu, Yepasi pemvura Kuongorora & Kuisirwa kweData Logger.
Wellpoint Dewatering Sisitimu:
UPVC Casing Pipe inogadzira kambani Vinyl Mapaipi yakagadzira Vinyl dewatering masystem ayo anokwanisa kuratidza kubatsira kwazvo mukuderedza tafura yemvura yepasi muvhu ine kubatana kwakadzika uye kukwana. Iyo yakanakira kune isina kudzika mafififiyu apo iyo nhanho yemvura inoda kudzikiswa kwete kupfuura anopfuura gumi nemashanu tsoka. Vinyl wellpoint dewatering masystem anokutendera iwe kupomba kubva kumazana marita paminiti mune yakanaka jecha matope kusvika kumazana nezviuru zvemarita paminiti yega mumafera uye jecha rakakora.
Iyo inoratidzira zvakanaka mapoinzi akatenderedzwa kutenderera kwekuchera uye akabatana kune yakajairika musoro. Izvi, zvakare, zvakabatana kune imwe kana yakawanda pombi. Kuchera kwakadzika kunoda matanho akati wandei etsime masisitimu nekuda kwekukanganiswa kwepombi.
Zvipenga zveVinyl zvinofambidzana neakawanda emhando yepamusoro maturusi uye zvishandiso zvinobatsira mukubudirira kumisikidza kwePVC Casing pombi. Izvi zvishongedzo zvinowanikwa kune iyo yakazara renji.
Yakadzika tsime uPVC Casing System
Nei VINYL Zvipombi Zvako Zvakanakisisa Kubheja?
Wepamusoro Adapter kana maConnectors
Kukanda Pipe Accesories 2
Kukanda Pipe Accesories 3